२४ बर्षकी युवतीको स्नेही काखमा २२ सन्तान| Nepal Pati
२४ बर्षकी युवतीको स्नेही काखमा ३१ सन्तान
साँझको पाँच बज्नै लागेको थियो । गर्मीसंगै सुरु भएको हावाहुरी चल्ने मौसममा एक्कासी पानी पर्ला झैं भएर आकाशमा बादल मडारीरहेको थियो । ललितपुरस्थित कुसुन्ती हाइटमा रहेको एउटा पर्खालसहितको घरमा खुलेको आकाश जस्तै शान्त र निश्चलता देखिन्थ्यो । भर्खरकी युवती साना दुधे बालकदेखि प्रौढ उमेरका महिलाको रेखदेखमा ब्यस्त थिइन् । २१ जना महिला लहरै बसेर खाजा खाइरहेका थिए । केही केटाकेटी पनि । सबैलाई कतै न कतै सडकबाटै उठाएर ल्याइएको थियो ।
मानसिक सन्तुलन ठीक नभएकै अवस्थामा ‘नेपाल स्नेही काख’ संस्थाको घरमा पुगेका उनीहरु विस्तारै तङ्ग्रीदै छन् । यो एउटा यस्तो संस्था हो जहाँ मानसिक रोगबाट विक्षिप्त भएर सडकमा पुगेकाहरुलाई उद्दार गरिन्छ । २४ बर्षकी युवती श्रीनेहा पोखरेल तीनै बालबालिका र महिलाको अभिभावक बनेकी छिन् ।
किन सेवामा ?
जीवनमा सम्हाल्न कठिन भनेकै मन र मस्तिष्क हो । दुवै विक्षिप्त भएर मानसिक सन्तुलन गुमाएका एकजनालाई मात्रै पनि सम्हाल्न झन कति कठिन होला ? तर श्रीनेहा त यिनीहरूसँग हरेकपल बिताउँदै छिन् । २५ टेक्दै गरेकी युवती यी सारा समस्याबीच रमाउन कसरी सकिन ? कुरा गर्दै जाँदा उनले त्यसको पनि राज खोलिन । १६ बर्षे किशोरावस्थामा कसैले बगिरहेको फोहर पानी खाएको देखेपछि पोलेको मन तीनै मान्छेको उद्धार र स्याहारपछि शान्त भएको थियो । एक गाँस भात खान पाए वापत देखिएको ती व्यक्तिको खुसीले श्रीनेहालाई समाजसेवा तिर डोर्याएको थियो । त्यहीबाट सुरु भयो सामाजिक सेवाको पहिलो औपचारिक यात्रा ।
एक दिन ‘भात खान मन छ ?’ भनेर सोधेँ । इच्छा व्यक्त गरेपछि घरमा गएर खाना पकाएर ल्याएँ । खाना खुवाउनुअघि हात धोइदिँदा उहाँ नराम्रोसँग रुनुभयो । त्यही उहाँको आँशुले मलाई कयौंको खुसी फर्काउने बाटोतिर मोडिदियो ।’ आमाले सञ्चालन गरकोे नवीकरण अनाथ असहाय बालउत्थानले पनि श्रीनेहालाई समाजसेवामा लाग्न प्रेरित गरिरहेको थियो ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएकी श्रीनेहाले बुवाको माया पाउन सकिनन् । सानै छँदा बाबुको मृत्यु भयो । श्रीनेहाको सिंगो संसारका रुपमा आमाको यात्रा समाजसेवातिर थियो । पारिवारिक अवस्था र जिम्मेवारीले ८ कक्षामा नै जागिर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
यसरी जन्मियो स्नेही काख
एकजना पुरुषको उद्धार र उपचारपछि श्रीनेहाको मन सडकमा भेटिएका मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलातिर तानियो । एकजनालाई गरिएको त्यो उद्धारले चर्चा भएपछि बालुवाटारबाट फोन आयो ‘एक जना दिदी अर्धनग्न अवस्थामा बाटोमा हुनुहुन्छ । आउनुपर्यो ।’ लगत्तै बालुवाटार पुगेकी श्रीनेहाले उनको उद्धार त गरिन तर कहाँ राख्ने समस्या आइपर्यो । घरमा राख्नसक्ने अवस्था थिएन । साथीभाईको सहकार्यमा उद्धार गर्दा गर्दै ८, ९ जना पुगेपछि घरको आवश्यकताले नेपाल स्नेही काख नामक सस्था संचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगिन् ।
आठ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल स्नेही काखको घरमा अहिले २१/२२ जनालाई राखिएको छ । जहाँ सडकमा विक्षिप्त अवस्थामा भेटिएकाहरुलाई उद्धार गरेर राखिन्छ । उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गराउनेदेखि बालबालिकालाई पढाउनेसम्मका काम श्रीनेहाको जिम्मेवारीमा छ । श्रीनेहा भन्छिन्, ‘हामीले यस्तो अवस्थामा पनि महिलालाई भेटेका छौं । जसलाई एचआईभी पोजेटिभ भएको थियो । कोहीलाई भिरङी लागेको थियो । कोहीको त गुप्ताङ नै कुहिएको थियो ।’
बलात्कार हुँदाहुँदैको महिलाको उद्धार गरेको नमिठो अनुभव पनि उनीसँग छ । ‘पहिला त लाग्यो आफ्नो मान्छेले लछारपछार पार्यो होला, तर हामी अलि नजिक गयौं । लछारपछार पार्दै गरेका ३ जना भागे ।’ उनले भनिन, ‘सोधेपछि मात्रै थाहा भयो उनीहरु बलात्कार गर्ने प्रयासमा रहेछन् । अनि उनलाई सँगै लिएर आयौं ।’ उनका अनुसार जतिपनि महिला र बालिकाको उद्धार हुन्छ । स्नेही काखले सडकमा भेटिएका महिला, पुरुष दुवैको उद्धार गर्छ तर आश्रममा भने बालिका र महिलालाई मात्र राखिन्छ ।
कसरी चल्छ अभियान ?
श्रीनेहा रंगकर्मी हुन् । उनले थुप्रै म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् । सहयोगी हात र उनकै परिश्रमबाटै संस्था चलिरहेको छ । संस्थामा सातजना छन् । केशवप्रसाद रिजाल, रिमला पोख्रेल, प्रदीप पोख्रेल, रोनी श्रेष्ठ, राहुल श्रेष्ठ र सन्जोग श्रेष्ठ सबै जनाको लगाव उत्तिकै छ । उनीहरुले कमाएकोे पैसा खर्च गरेर संस्था चलेको छ । कहिलेकाँही कोही व्यक्तिहरु आफ्नो जन्मदिन, म्यारिज एनिभर्सरी, सेलिब्रेट गर्न सस्थामा पुग्नेहरुले पनि सहयोगको सानो बाटो जुराएको छ । स्नेही काखमा राखेका महिलालाई खाना खुवाउन मःम बेचेको संघर्ष पनि उनीहरुसँग छ । श्रीनेहा भन्छिन, ‘जो मानसिक रोगले विक्षिप्त छन्, उनीहरुलाई घरपरिवार र सरकारले उचित स्याहार र स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध मिलाइदिनुपर्छ । सबै भन्दा ठूलो हात घरपरिवारकै हुन्छ ।’
‘मैले आजसम्म खेलेका म्युजिक भिडियो, सानो पर्दाका चलचित्र, नाटकलगायतको पारिश्रमिक पनि यहीँ खर्चिएको छु ।’ तीनै महिलातिर देखाएर मुस्कुराउँदै श्रीनेहाले जवाफ दिइन । घरभाडा र उपचारखर्चमा मासिक एक लाख २० हजार आवश्यक पर्छ । सहयोगी मन भएकाहरूले कहिलेकाहीँ दाल चामल किनेर पुर्याइदिने गर्छन् । उनी भन्छिन्, ‘यस्ता व्यक्तिहरु मायाको भोका हुन्छन्, उनीहरुलाई प्रेम दिने हो भने पनि आधा भन्दा बढी रोग ठिक हुन्छ ।’